World Class Performer ဖြစ်သူ EXO အဖွဲ့ဝင် Kai ရဲ့ အသစ်ထွက်ရှိမဲ့ ဒုတိမြောက် solo album ရာဇဝင်
EXO အဖွဲ့ဝင် Kai ဟာ အဆိုပိုင်းမှာသာမက fashion industry ဘက်မှာရော entertainment ဘက်မှာရော ဘက်စုံနယ်စုံ ထူးချွန်နေတဲ့သူပါ။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာဆိုလည်း ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် K drama series တစ်ခုရိုက်ကူးထားပြီး Solo album 1 ချပ်လည်း မနှစ်က ထွက်ရှိထားပါသေးတယ်။
အဆိုပါ Solo album ရဲ့ title song “Mmmh” သီချင်းဟာဆိုရင် popular ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာနဲ့တဝှမ်း cover song လိုက်ကတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး solo album မှာ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ Dark type နဲ့ ချပြခဲ့ပေမဲ့ ယခုထွက်ရှိမဲ့ ဒုတိယ album ကိုတော့ Kai က နူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ soft type ချပြတော့မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ November 11 ရက်နေ့ (Single day) မှာဘဲ album ရဲ့ name နဲ့ Cover ကို EXO official website ကနေ ရုတ်တရက်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ဟာ Korea မှာဆို Pororo လေးတွေ လက်ဆောင်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Fan တွေကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပါ။ Album ရဲ့ name ကတော့ “Peaches” ဖြစ်ပြီး album cover အရောင်ကို အရောင်နုလေး သုံးထားပါတယ်။
Kai fan စစ်စစ် တွေဆို Kai ဟာ ဘယ်လောက်တောင် “Peach Punch” filter ကို ကြိုက်လည်း သိကြမှာပါ။ နောက်ပြီးတော့ သူ မက်မွန်သီးအရမ်းကြိုက်ကြောင်း Bubble မှာ ခဏခဏ စာပို့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ album အတွက် Kai ပေးခဲ့တဲ့ hint တွေပါ။ မနေ့ညက Kai ဟာ album နဲ့ပက်သက်ပြီး bubble မှာ ခုလို စကားတွေအများကြီး လာပြောခဲ့တဲ့အပြင် Profile ပုံကိုပါ မက်မွန်သီးပုံချိန်းထားပါတယ်။
🐻: ငါ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်
🐻: album ဘယ်လိုမျိုးထွက်လာမယ်ထင်လဲ?
🐻: “really peachy” ဆိုတာ ဘာလဲ?
🐻: kai က peachy ဖြစ်တယ်?
🐻: ဒီတခေါက်တော့ မင်းတို့ကို “Peach” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် သေချာရှင်းပြဖိို့ အခွင့်အရေးရပြီထင်တယ်။
🐻: မင်းတို့ကို ပြဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ဖူးကွာ
🐻: 114 peach time
EXO official site ကလည်း album ထွက်ရှိမဲ့နေ့ဟာ November 30 ရက်နေ့ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ Version က3မျိုးဖြစ်ပြီး သီချင်းက ၆ ပုဒ်ပါဝင်မှာပါ။ album preorder ကိုတော့ ဒီနေ့က စပြီး တင်လို့ရနေပါပြီ။
Source: Allkpop, EXO official site
Photocredit: EXO official site
Next ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ LIVE လေးမှာ Anti Fan တွေ နှောင့်ယှက်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ Zhao Lusi »
Previous « Jin, Cha Eun Woo တို့နဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တယ်ဆိုပြီး လူစိတ်ဝင်စားခံ​နေရတဲ့ "Idol: The Coup" ထဲက Kim Min Kyu
‘My Universe’ Remix အတွက် အကောင်းဆုံးအားထုတ်ခဲ့သူ SUGA အား ချီးကျူးပြောဆိုခြင်း
“The Feels” သီချင်းနဲ့ Billboard မှာ အဖွဲ့အတွက် မှတ်တမ်းသစ်တွေ ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ TWICE
2021 MTV EMAs မှာ ဆုပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ BTS နှင့်, aespa အဖွဲ့ရဲ့ ဂုဏ်တင်မှုတစ်ခု